I-Amazfit GTR: Ukucaciswa, ixabiso kunye nokwaziswa okusemthethweni | I-Androidsis
I-Amazfit GTR: I-smartwatch entsha kaXiaomi
UXiaomi yenye yeefemu Ininzi ithengisiwe ebaleni lezinto ezinxitywayo. Ngokuyinxalenye ngumbulelo kuluhlu lwazo lwezacholo, ukuba yi-Smartband 4 yokugqibela Ukufikelela kwimarike ngokusemthethweni. Inkampani ngoku isishiya newotshi yayo entsha, esele inikezelwe ngokusemthethweni e-China. Sifumana iAmazfit GTR, Ezisa uthotho lotshintsho kwinkampani.
UXiaomi uyazi ukuba kufuneka phucula olu luhlu lweewotshi ukugcina ukhuphiswano lukude. Yinto abayenzayo ngale Amazfit GTR, esishiya sinoyilo olulungisiweyo. Ukongeza, inkampani yazise uthotho lwemisebenzi emitsha kuyo, abanokuqiniseka ukuba bayayithanda kakhulu.
Umlindo uza kuphehlelelwa kubungakanani obubambekayo kwintengiso, ukuze abasebenzisi babe nakho ukukhetha eyona ibalungeleyo kule meko. Njengesiqhelo kwiiwotshi ezifanelekileyo zohlobo lweTshayina, sifumana imitya eyahlukeneyo kunye neenguqulelo. Ngamnye unokuziqhelanisa nokuthanda kunye nesitayile.
1 Ukucaciswa kweAmazfit GTR
Ukucaciswa kweAmazfit GTR
Uphawu lwaseTshayina lubonisa iwotshi enganyangekiyo, ngokuzimela okuhle kunye nepaneli ye-AMOLED kule meko. Bazigcinile izinto ezininzi zakudala kule Amazfit GTR, nangona kwangaxeshanye besishiya nemisebenzi emitsha, eyilelwe ukukholisa kwaye kuninzi kubasebenzisi abafuna ukuvuselela i-smartwatch yabo. Oku kukucaciswa kwayo:
Imodeli yesikrini esingu-47 mm: 1,39 intshi ye-AMOLED ngeGorilla Glass
Imodeli yesikrini esingu-42 mm: 1,2 intshi ye-AMOLED ngeGorilla Glass
Imilinganiselo 47 mm: 47.2 x 47.2 x 10.75 mm
Imilinganiselo 42mm: 42.6 x 42.6 x 9.2 mm
Ibhetri 47 mm: 410 mAh (ubude beentsuku ezingama-24)
Ibhetri ye-42mm: 195 mAh (ubude beentsuku ezili-12)
Izixhobo: Ikhampasi, Umlinganiso wokubetha, uxinzelelo lomoya, umsebenzi, ukulala,
Abanye: IP68 amanzi kunye nothuli ukumelana, NFC
Inkqubo yokusebenza: I-Amazfit OS, ehambelana ne-Android 5.0 kunye ne-iOS 10 okanye ngaphezulu
I-Amazfit GTR ifika ngobukhulu obubini, ezinoyilo olufanayo, kodwa idayala yayo itshintsha ubungakanani ngokucacileyo. Ke ngoko, abasebenzisi baya kuba nakho ukukhetha uhlobo lwale wotshi abayibona ilungile kwimeko yabo. Kwimeko yemodeli ye-47 mm, kufanele kuqatshelwe ngaphezulu kwako konke ukuzimela okukhulu okuya kusinika, ukuya kuthi ga kwiintsuku ezingama-24, ngenxa yomthamo weebhetri ze-410 mAh.
I-Amazfit GTR ifika ne-NFC edibeneyo, Ukuze sikwazi ukuyisebenzisa ukwenza iintlawulo mobile. Njengazo ezinye iiwotshi, inoxanduva lokulinganisa umsebenzi wethu womzimba kunye nokulala ngawo onke amaxesha. Singayisebenzisa xa siqeqesha kwaye sidlala imidlalo. Ingasetyenziselwa ukudada, kuba sinokuntywila ukuya kuthi ga kwiimitha ezingama-50 emanzini, ngoko ke sinokuyisebenzisa echibini ngaphandle kwengxaki. Kuya kubakho iinguqulelo ezimbini, eqhelekileyo ene-aluminium kunye noguqulelo lwe-Iron Man, oluza necala le-titanium, elinobunzima obungaphezulu kwaye libiza kakhulu kunesiqhelo.
IXiaomi Amazfit GTR sele ithengiswa e-China, kuzo zonke iinguqulelo zayo. Okwangoku akukho lwazi lunikiweyo malunga nokuqaliswa kwayo eYurophu. Ke kuyakufuneka silinde inkampani ukuba yabelane ngedatha ethe kratya kuthi malunga noku. Kodwa akufuneki kuthathe ixesha elide ukuba semthethweni eSpain.
Sifumana iinguqulelo zayo ezininzi, Kuxhomekeke kubukhulu ngakumbi. Ngamnye kubo uza nexabiso eTshayina, esikubonisa lona ngezantsi:
Imodeli enetyala lealuminiyam engama-42mm ngexabiso le-799 yuan (i-103 euros to change)
Inguqulelo enecala lealuminiyam engama-42mm kunye neebhanti zesikhumba ezixabisa i-999 yuan (129 euro to change)
Imodeli engama-47 mm enecala le-aluminium lixabisa i-999 yuan (129 euro to change)
Ushicilelo olukhethekileyo lwe-Iron Man 47mm olugqityiweyo kwi-titanium luxabiso nge-1399 yuan (i-180 euro ukuyitshintsha)
Kusenokwenzeka ukuba amaxabiso azokwahluka xa kusungulwa iYurophu, mhlawumbi ibiza kakhulu. Nangona kuya kufuneka silinde de sazi ngakumbi malunga nokuqaliswa kwale Amazfit GTR eYurophu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-Amazfit GTR: I-smartwatch entsha kaXiaomi
IMicrosoft sele isebenza kwimowudi emnyama ye-Outlook
I-Galaxy A40 ifumana i-Samsung Pay kuhlaziyo lwayo olutsha